२ करोड ३३ लाखमा बिक्यो दुनियाँकै महंगो ब्याग | DON Nepal २ करोड ३३ लाखमा बिक्यो दुनियाँकै महंगो ब्याग – DON Nepal
Home रोचक २ करोड ३३ लाखमा बिक्यो दुनियाँकै महंगो ब्याग
By Don NepalJun 20, 2018, 18:02 pm0
एउटा ब्यागको मूल्य कतिसम्म पर्ला ? बेलायतमा एउटा मामुली ब्याग २ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको मूल्यमा बिक्री भएको छ ।
लण्डनमा आयोजित लिलामीका क्रममा १० वर्ष पुरानो हर्मेस बर्किन ब्राण्डको ब्याग २ लाख १७ हजार १ सय ४४ डलरमा बिकेको हो । यो सँगै यस ब्यागले सबैभन्दा महंगो युरोपेली ब्यागको कीर्तिमान पनि राखेको छ ।
स्मरण रहोस् विश्वमा सबैभन्दा महंगो ब्यागको किर्तिमान पनि हर्मेस बर्किनकै नाममा छ । सन् २०१७ मा हंगकंगमा उक्त कम्पनीको एउटा ब्याग ३ लाख ८० हजार डलरमा बिकेको थियो ।
Previous Postरोनाल्डोले गोल हानेर खुसि मनाउदै गर्दा रोनाल्डोको नजिकै नेपाली झन्डा फरफरायो हेर्नुहोस यी तस्बिरमा ! Next Postपरीक्षाफल प्रकाशित, यसरी हेर्नुस नतिजा